बालुवाटारमा कसले के भनेर उक्सायो ओलीलाई ? « Dainik Online
बालुवाटारमा कसले के भनेर उक्सायो ओलीलाई ?
प्रकाशित मिति : १७ बैशाख २०७७, बुधबार २ : ५०
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार साँझ बालुवाटारमा आफू निकटका सांसदहरूसँग अति लचक भएर अध्यादेश फिर्ता गर्दा पनि नैतिकताको कुरा उठाउँदै राजीनामा मागेर षड्यन्त्र गरिएको गुनासो सुनाए ।
‘मेरो भेटघाटको ७० प्रतिशत समय यिनीहरू (नेकपा सचिवालयका नेता) को गुनासो सुन्न र चित्त बुझाउनमै गयो, १० थरी कुरा गरेर मलाई अघि बढ्न पनि दिएनन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै सांसद महेश बस्नेतले भने, ‘हाइलेभलमा कुरा गर्दागर्दै तपाईंहरूसँग भेट्न पनि पाइएन, अब तपाईंहरूको सुझावअनुसार चल्छु ।’
बस्नेतका अनुसार उक्त छलफलमा उपस्थित अधिकतर सांसदले कत्ति पनि नझुकेर जतिसुकै कडा कदम चाल्नसमेत पछि नपर्न सुझाव दिएका थिए । यता वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहसँगको छलफलमा कुरा नमिलिरहेको र उता सांसदहरूको आडभरोसा रहेका बेला नेकपा अध्यक्ष ओलीले मंगलबार बोलाउने भनिएको पार्टी सचिवालय बैठकसमेत आह्वान गरेनन् ।
मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री भेट्न पुगेका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि ओलीले यही आशयको कुरा गरेका थिए । उनले प्रचण्डसँगको भेटमा कसैको दबाब आउँदैमा आफूले सरक्क कुर्सी छाडेर नहिँड्ने बताएको उनीनिकट स्रोतको भनाइ छ । ‘पहिले अध्यादेश फिर्ता लिनुस् भन्ने, पछि फेरि राजीनामा दिनुस् भन्ने,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘यो कहाँको नैतिकताको कुरा भयो, तपाईंहरूले मिलेर मलाई हटाउन षड्न्त्र गर्नुभएको हो ।’
करिब २ घण्टा चलेको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले विषयवस्तु अलिकति मत्थर नहुँदासम्म पार्टीका कुनै पनि संगठनको बैठक आह्वान नगर्न प्रस्ताव गरेका थिए । प्रचण्डले भने बैठक बोलाउन दबाब नै आएकाले एकछिनका लागि भए पनि आह्वान गर्नुपर्ने तर्क राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्नुअघि बिहान प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपालका बीचमा नेपाल निवास कोटेश्वरमा छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा नेपालले प्रधानमन्त्रीले आफूले सृजना गरेको समस्याको निकास आफैंले दिनुपर्ने बताएका थिए ।
‘मेरो अडानमा म टसको मस छैन, ओलीजी बैठक बोलाएर जवाफ दिन तयार हुनुपर्छ,’ प्रचण्डसँग नेपालले भनेका थिए । त्यसपछि दिउँसो बालुवाटार पुगेका प्रचण्ड र ओलीबीच बैठक बोलाउने सहमति भएको हो । बुधबार साँझ ५ बजे बस्ने सचिवालयको मूल एजेन्डा नै पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक हुने सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको कामकारबाहीबारे स्थायी कमिटी सदस्यहरूले जवाफ खोजिरहेका छन्,’ खनालले भने, ‘हामी छलफल गरेर बैठकको मिति तय गर्छौं ।’
सचिवालय बैठक नै तत्काल डाक्न नहुने मनस्थितिमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली स्थायी कमिटी बैठकका लागि सजिलै तयार हुने देखिएका छैनन् । त्यसको संकेत स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले पनि गरेका छन् । ‘पार्टीमा समस्या आइपर्छन्, मतभेद हुन्छ, ती मतभेद अनौपचारिक रूपमा छलफल गरेर एक किसिमको सहमति जुटेपछि स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनु उपयुक्त हुन्छ,’ परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका नेता ज्ञवालीले भने, ‘परिस्थिति तातो भएका बेला बैठक बस्दा सही परिणाम दिन्छ भन्न सकिन्न ।’ ज्ञवालीले एउटा विषयलाई लिएर पार्टी विभाजनसम्मबारे छलफल चल्नु दुःखद भएको बताए ।
स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसालले भने पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन हुँदैमा पार्टी विभाजन हुन्छ भनेर बुझ्नु उपयुक्त नहुने बताए । ‘हामीले प्रधानमन्त्रीको चाहना के हो र उहाँले निकास दिन के उपाय ल्याउनुहुन्छ, उहाँकै मुखबाट सुन्न चाहन्छौं,’ भुसालले भने ।
स्थायी कमिटी सदस्यहरूको चर्को दबाबका कारण अहिले सचिवालय बैठक मात्रै गर्ने स्थिति नरहेको नेता खनालले बताए । त्यसैले बुधबार साँझको सचिवालय बैठकमा ओली र उनीइतरका पक्षहरूबीच रस्साकस्सी हुने देखिएको छ ।
अहिलेसम्मका ‘वान टु वान’ बैठकहरूमा ओलीले अध्यादेश गल्ती भएर फिर्ता गरेको भन्दा पनि नेताहरूको आग्रहमा फिर्ता गरिएको भन्दै त्यो विषयलाई अरू धेरै नचर्काउन आग्रह गरिरहेका छन् । उनले सोमबार साँझ सांसदहरूको छलफल र मंगलबार दिउँसो प्रचण्डसँगको भेटमा पनि बरु जस्तोसुकै परिस्थिति सामान गर्ने तर नझुक्ने संकेत गरिसकेका छन् ।
ओलीसँगको छलफलपछि प्रचण्ड मंगलबार साँझै पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई भेट्न उनको निवास भैंसेपाटी पुगेका थिए । त्यहाँ पनि प्रचण्डले गौतमको अहिलेको पोजिसन के हो भनेर बुझेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आफ्नो अडानबाट विचलित नभएको वामदेव कमरेडले प्रचण्ड कमरेडलाई बताउनुभयो,’ गौतमनिकट स्रोतले भन्यो ।
गत ११ गते गौतमकै निवासमा भएको सरकारबाहिर रहेका सचिवालय सदस्यहरूको भेलाले अब ओलीले काम गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । त्यहीअनुसार गौतमले ओलीलाई ‘अब तपार्इं आराम गर्नुस्’ पनि भनेका थिए । ‘भैंसेपाटी भेलाकै स्पिरिटअनुसार एजेन्डा अघि बढ्छन्,’ एक सचिवालय सदस्यले भने ।
पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले यसबीचमा उठेका सबै विषय बैठकका एजेन्डा बन्ने बताए । ‘धेरै खालका कुरा उठेका छन्, गम्भीर समीक्षा गरिन्छ,’ उनले भने, ‘समस्याको निकास के हुन्छ भन्ने त कुरा हुन्छ नै, पार्टी एकताको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि आउलान् ।’